अक्षरमार्गको वार्षिकोत्सवमा ८ सर्जक सम्मानित Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काभ्रे : अक्षरमार्गले ७ नेपाली र एक भारतीय सर्जकलाई सम्मान गरेको छ। अक्षरमार्ग त्रैमासिकको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वाङ्मयको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने सर्जकहरूलाई सम्मान गरिएको हो। शनिबार पनौतीमा आयोजित सम्मान समर्पण तथा पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा चार वटा पुस्तक पनि लोकार्पण गरिएको छ।
उक्त सम्मान समारोहमा वरिष्ठ साहित्यकार तथा साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरेलाई विष्णुहेम अक्षरमार्ग वरिष्ठ साधक सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। यस्तै, वरिष्ठ साहित्यकार तथा समालोचक डा.शैलेन्दु प्रकाश नेपाललाई नरबहादुर अक्षरमार्ग सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ। श्रीराम अक्षरमार्ग स्मृति सम्मानबाट साहित्यकार तथा साहित्यिक पत्रकार गंगा सुवेदीलाई सम्मान गरिएको छ।
यस्तै कृष्णसुन अक्षरमार्ग साहित्यिक सम्मानबाट साहित्यकार तथा साहित्यिक पत्रकार श्रीराम श्रेष्ठ सम्मानित भए। साहित्यकार डा.साधना पन्त प्रतीक्षालाई कृष्णदास अक्षरमार्ग स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित गरियो भने सर्जक डा. विजय पण्डितलाई ध्रुबमीरा अक्षरमार्ग मिराज प्रतिभा सम्मानद्धारा सम्मानित गरिएको छ। अक्षरमार्ग भरतराज काभ्रेली गौरव सम्मानबाट साहित्यकार तुयुकाजी ताम्राकार सम्मानित भएका छन्। गायक तथा संस्कृतीकर्मी विजयराम कर्माचार्यलाई खड्गबेद अक्षरमार्ग सहयात्रा सम्मान प्रदान गरिएको छ।
कार्यक्रममा २०७७ सालको एसईई परीक्षामा सूर्योदय माविबाट सामेल भई जिपिए ४ ल्याएर सूर्योदय टप गरेका शाश्वतप्रसाद लाकोजूलाई पूर्णमाया लुचिकाजी एसईई सम्मानबाट सम्मानित गरिएको छ।